FREE EGWUREGWU MAKA PS PLUS NA XBOX LIVE GOLD NDỊ DEBANYERE AHA NA JENỤWARỊ 2019: NYOCHAA - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Free PS Plus Games na Jenụwarị 2019
Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri
Mpaghara nke Enders HD gbasara mkpokọta
Ndị agha dara ada: Mkparị nke nnupụisi
Ogbugbu ndi mmadu ajuju
Free Xbox Live Gold Games na Jenụwarị 2019
Lara Croft na Onye Nchebe nke Ìhè
Nnukwu mkpu 2
Sony na-emesapụ aka na egwuregwu nke ụdị dịgasị iche na njirimara egwuregwu. Na Jenụwarị, a ga-ahapụ anyị ka anyị na-aga skiing, na-aga njem site na mgbagwoju anya ụwa efu, na ọbụna ndokwa agbụrụ na hoverboards.
Egwuregwu egwuregwu dị egwu na-enye ohere ka onye ọkpụkpọ ahụ nwee mmetụta dịka skier ma ọ bụ snowboarder
Ihe kachasị elu na mmefu ego na nnukwu atụmatụ nke ndepụta bụ simulator nke egwuregwu dị oke egwu. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị egwuregwu ka ha rịgoro n'elu ugwu kachasị elu ma na-asọpụ na snowboard, ski, ma ọ bụ na-efe n'elu ọnụ mmiri na-ada n'elu nku dị ka nnụnụ. Adrenaline na arahụ arahụ ga-enye mmetụta uche ndị a na-agaghị echefu echefu, na ohere ịhazi ndokwa nke agbụrụ na ndị enyi bụ ego ego na-enye obi ụtọ na mgbasa ozi na-akpali agụụ mmekọahụ.
Egwuregwu ahụ na-enye gị ohere ịkwatu ma wuo ụlọ
Ịga njem site na ụwa efu n'emebeghị ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị, n'ihi na ugbu a, ọ bụla ala na mgbidi ga-agbajikwa! Portal Knights jikọtara ihe dị iche iche RPG na akpụkpọ ụkwụ na ụwa zuru ụwa ọnụ. Na-agbaji, dị ka ha na-ekwu, anaghị ewuli elu, n'ihi na iji wuo ụlọ ị ga-amụta ọrụ na tinker na ihe ndị na-akpata ya, nsị ya bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke egwuregwu.
Na-enwe mmetụta dị ka onye na-anya ụgbọ mmiri nke ezigbo anụ ọkụ.
Ihe oru Japanese mara mma nke a raara nye ihe banyere robots, site n'aka onye okike Hideo Kojima Metal Gear. Ndị na-egwu egwu ga-ejide igwe ọkụ na-alụ ọgụ na ịma aka ngwaọrụ ndị ọzọ robotic. Mpaghara nke Enders HD gbasara mkpokọta bụ onye nlekọta nke ọrụ a na-ewu ewu gara aga. Ihe ndị dị mkpa nke egwuregwu ahụ nọgidere na-adịghị edozi, ma ndị na-emepụta ihe nkiri na-agbasi mbọ ike, ihe dị iche iche, dị ka o yiri, aghọwo ọbụna karịa.
Egwuregwu ahụ gụnyere echiche dị iche, ma usoro nchịkwa dị mfe dịgidere.
Akụkọ banyere ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa maara ezigbo ọrụ ịgba ọsọ nke ndị egwuregwu na-asọmpi na ụdị njem ndị ọzọ. E nwere ụgbọala ndị ọgba tum tum, ụgbọ ala ndị na-adịghị mma, ndị agha ndị agha na-agbakọta na mpempe ígwè, mana ịchụgharị n'elu ụgbọ mmiri adịghị amasị ya.
Nghọta, n'agbanyeghị echiche pụrụ iche, ihe egwuregwu ahụ dị mfe: agbụrụ na-agba ọsọ na ụdị ụdị agbụrụ na onye ndu.
Ihe ndị na-akpali mmasị na nhazi mara mma na ihe osise mara mma
Ndị nwe PS Vita console na-enweta nleta na-enweghị isi na ngwaọrụ ha nke nzọụkwụ nzọụkwụ na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị: Ụgha nke nnupụisi. Akwa egwuregwu nke iji jikwaa njedebe nke ihe odide, onye nke ọ bụla nwere ikike pụrụ iche. Ndị odide a na-adọrọ mmasị, dị mma ma dị mma, ndị iro ahụ dị oke aghụghọ na dị ize ndụ. Mmekọrịta ọrụ na ngwakọta ọnwụ - ụzọ nke mmeri. Ezigbo anime eserese ga-amasị ndị hụrụ ụdị a.
Na egwuregwu a, 2D ndịna-eme egwuregwu na ọsọ ọsọ egwuregwu egwuregwu.
Onyinye ikpeazụ nke January site na PS Plus bụ SuperDonant Alien Assault 2D. Omume dị mfe na akụkụ abụọ, nke ezigbo ụlọ ọrụ dị. N'eziokwu, enwere nnukwu nnukwu nsogbu n'ime ya - egwuregwu ahụ dị nnọọ oke. Ị gaghị achọpụta otú ị ga - esi jikwaa egwuregwu ahụ site na mmalite ruo ọgwụgwụ, n'ihi na enwere nanị ngụkọta nke ọkwa 12. Okpomume di elu na ihe ndi ozo nwere ike ime ka ndi na-egwu egwu ma ghara inwe oge ichoputa.
Microsoft na-enye egwuregwu egwuregwu anọ n'efu. N'eziokwu, onye ọ bụla nọ n'okpuru oge nkesa dị iche.
A egwuregwu na-agaghị ahapụ indifferent ndị hụrụ ọtụtụ-larịị gameplay
Niile January site na 1st ruo ụbọchị 31 ị nwere ike nweta Celeste platformer kpamkpam free. Egwuregwu egwu egwu ga-amasị ndị Fans niile ka ị bụrụ akwara. Ndị na-egwu egwu ga-eru n'elu ugwu ahụ, ma ụlọ iri abụọ na abụọ na-echere ha ka ha gaa mgbaru ọsọ ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-egosi na ụfọdụ ọkwa enweghị ike ịchacha ma ọlị, mana naanị ịdị uchu na itinye uche ga-enyere gị aka ịnagide ebe siri ike.
Na ndị a na-egwu egwuregwu autosimulator ga-enwe ike igosi onwe ha na-arụ ọrụ ọhụụ ọhụrụ.
E weputara ọrụ ịgba ọsọ na mgbakọ ahụ na 2016. Tupu anyị abụrụ otu simulator nke ụgbọ ala kpochapụwo, nke ndị egwuregwu ga-anọ n'azụ ụkwụ nke ụgbọala ndị na-ewu ewu ma na-ebute ndị na-agba ọsọ na ngalaba nke egwu ahụ. Ezigbo physics, ndị dị elu na-ese foto na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-echere ndị fan nke ịgba ọsọ na ndenye aha Gold. Enwere ike inweta oru ngo site na January 16 ruo February 15.
Ihe ohuru banyere aru na-adighi nma Lara Croft ga-eme ya obi
Onye ọbịa si 2010, otu n'ime ọrụ ndị kachasị egwu na mbara igwe Tomb Raider. Ihe omuma ihe zuru oke maka ndi choro akwukwo kwesiri ekwenye. Dakwanye ụwa nke njem, ị ga-enwe oge site na 1 ruo 15 January.
Akụkụ a nke akụkọ banyere Lara Croft ga-enye ndị na-egwu egwuregwu aka ijikọta mgbalị ndị na-agafe agafe, bụ nke, site n'ụzọ, aghọwo ihe na-eme ihe karịa egwuregwu ndị ọzọ na mbara igwe.
Akụkụ nke abụọ nke onye na-agba ụta ga-akwadebe ndị egwuregwu maka nke atọ.
Ọrụ ọhụrụ a ga-ekesa ga-abụ otu n'ime ndị na-ese okwu na mbara igwe nke Far Cry 2. A na-akpọkarị ihe a na-eme Ubisoft ka ọ bụrụ ihe a ga-eme maka Far Cry 3, n'ihi na ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ sitere n'akụkụ nke abụọ gafere na egwuregwu ndị ọzọ nke usoro ahụ wee chetara ha. Ụfọdụ ndị nkatọ na-ekwu na ọbụna Far Cry 2 bụ nnukwu ọrụ. Ka o sina dị, ọ bara uru ịnwale. Onye na-ese ihe na-esi na 16 ruo 31 January.
Egwuregwu egwu bụ otu n'ime ọtụtụ ihe mere ndị Xbox na PlayStation ji azụ ndị na-akwụ ụgwọ. Otutu oru ngo bu ihe kwesiri ya itinye uche na ha ma weputa oge bara uru. Na Jenụwarị, ndị na-agbanye mgbatị Microsoft na Sony ga-enweta ọtụtụ egwuregwu na-adọrọ mmasị dịgasị iche iche, nke ọ bụla ga-enwe ike iwepụ egwuregwu ahụ ruo ogologo oge.